WAR DEGDEG AH Toos ula soco wararka weerarka Paris | Saxil News Network
WAR DEGDEG AH Toos ula soco wararka weerarka Paris
Paris (SAXILNEWS)_Baaritaan adag oo ka socda goobaha ay weerarada ka dheceen ee Paris
12: 31 SGA: Madaxweynaha Faransiiska ayaa ballan qaaday in amniga dalkaasi la adkeynaayo, wuxuuna xaqiijiyay in Faransiiska aysan joojineynin dagaalkeeda ka dhanka ah “argagixisada”.
12:13 SGA: Muftiga muslimiinta Suniyiinta caalamka ayaa “naceyb xun” ku tilmaamay weerarada Paris oo uu cambaareeyay.
12:09 SGA: Faransiiska ayaa lagu eedeynayaa in sirdoonkoodu uu “fashilmay”, sida xisbiga mucaaradka ee dalkaasi uu sheegayo.
Askar ku sugan jidadka magaalada Paris oo amniga sugaya
Militariga Faransiiska oo howlgal ku jira
Dad ubaxyo dhigaya goobihii la weeraray
Ubaxyo yaalla meelaha dadka lagu laayay
11:17 SGA: Ra’iisul wasaaraha Israa’iil ayaa cambaareeyay weerarada Paris, wuxuuna sheegay in dagaalka wadajirka ah ay ka caawindoonaan Faransiiska.
Madaxweynaha Faransiiska oo weerarada kaddib si weyn loo ilaalinaaya
Nin ku dhaawacmay mid ka mid ah weerada oo la daaweynaayo
Weerarada waxay ka dheceen dhimayaashan dhexdooda.
10:27 SGA: David Camero, Ra’iisul wasaaraha Britain ayaa weerarada Paris ku tilmaamay wax laga argagaxo, asigoo kulminaya ciidamada amniga ee loo yaqaano COBRA ee UK si arrimaha amniga uu ugala tashado.
Boolis baaraya gudaha Baarka
Nin laga soo badbaadiyay baarka gudihiisa
10:05 SGA: Madaxda Ruushka iyo Iiraan ayaa si wada jir ah u dalbaday in dagaalka ka dhanka ah “argagixisada” dhinac looga soo jeesto oo la iska kaashado.
Dadkii la badbaadiyay oo laga kexeeyay nawaaxiga goobta weerarka
09:43 SGA: Wakaaladda wararka ee Iiraan ayaa sheegtay in dal ahaan ay sidoo kale dhibane u yihiin weerrada “argagixisada” mana aysan sharixin sababta Madaxweyne Ruuxaani u joojiyay safarkiisa Yurub.
09:25 SGA: Dacwad oogayaasha Faransiiska waxa ay sheegayaan inay suuragal tahay in weli ay “argagixiso” ku dhex dhuumanayaan Faransiiska.
09:21 SGA: Ra’iisul wasaaraha Britain ayaa waxa uu qabanayaa kullan degdeg ah oo laamaha amniga ay ka qeybgalayaa, taas oo jawaab u ah weerarkii “argagixiso” ee Paris lagu qaaday.
Khubarada baareysa goobaha weerarada
09:12 SGA: Faransiiska sanadkan waxaa ka dhacay weeraro aad u halis ah oo lagu eedeeyay “argagixiso” sida gooxda la baxday Khilaafada Islaamka.
Nin meel qashinka lagu shibo ku dhuumanaya intuu weerarka socday
Nin dhulka jiifo oo boolis ay baarayaan aqoonsigiisa
Dhaawacyada oo weli la uruurinaayo
Madaxweynaha Faransiiska oo ku sugan Bataclan oo ah meesha weerarada ka dheceen
08:27 SGA: Madaxweynaha Faransiiska oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay dagaal la gali doonaan “argagixisada”.
08:25 SGA: Ra’iisul wasaaraha Pakistan Mohamed Nawaz Shariif ayaa si adag u cambaareeyay weerarka Paris.
Nin kabadbaaday weerarka
Ehello iyo saaxiibo dib u kulmaaya
Dadka ka badbaaday weerarka
Waa militari ku dhex sugan magaalada oo dhan
08:06 SGA: Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in Faransiiska ay kala shaqeeyaan la dagaallanka “Argagixisada”.
Garoonka uu weerarka ka dhacay
Askar kormeereysa magaalada Paris
Madaxweyne Hollande oo gaaray tiyaatarka la weeraray oo 100 qof ay ku dhinteen
Boolis ku qulqulaya cawayska Bataclan
Image Haweeney dhaawac ah
qaar kamid ah dadkii ka soo abxsaday afduubka Bataclan
Gollaha Wasiirada Faransiiska oo galay shir deg deg ah.
Image captionshaqaalaha gurmadka deg-dega oo dadka dhaawac ah ka saaray cawyska Bataclan
Baliis dheeraad ah ayaa gaaray Bataclan
02:41 SGA: Mid kamid ah dadkii ku sugnaa goobta lagu caweeya ee Bataclan ayaa BBC-da u sheegay in rag hubaysan oo ku qaylinaya ”Allaahu Akbar” ay soo galeen dhismaha. wuxuu sheegay in uu arkay maydadka 15 qof.
mid kamid ah weerarada Paris waxa uu ka dhacay garoonkan oo cayaar saaxiibtinimo ay ku daxmaraysay France iyo Germany.
Hollande oo uu ay ka muuqata argagax ayaa la hadlay qaranka